Nidaamka Lacag celinta - YTpals
Waxaan soo bandhignaa alaabada aan la tirin karin oo la beddeli karo. Macaamiil ahaan, waxaad mas'uul katahay inaad fahanto tan markaad iibsanayso badeecad / adeeg kasta oo ka shaqeeya barteenayada.
La xiriir Taageerada Macaamiisha
Dhibaatooyinka 99% waxaa lagu xallin karaa emayl fudud. Waxaan kaa codsaneynaa inaad nagala soo xiriirto anaga oo adeegsanaya annaga Nala soo xiriir bogga. Waaxdeena Adeegga Macaamiisha ayaa kugu soo laaban doona gudaha 24-72 (badiyaa wax ka yar saacadaha 24) dib u eegista walaacaaga iyo xalka.
Codsiyada Lacag Celinta
Bixinta sheyga / adeegga:
Xaaladaha qaarkood xilliyada habsami u socodka ayaa gaabis ah, waxayna qaadataa waqti dheer in amarkaagu dhammaado. Xaaladda jirta, waxaan kugula talineynaa inaad nala soo xiriirto si aan kuu caawino. Sheegashada keenista waa in loo soo gudbiyaa waaxda Adeegga Macaamiisha qoraal ahaan muddo xNUMX maalmood gudahooda ah markii la amro.
● Soosaarka oo aan loo sharxin:
Arimaha noocan oo kale ah waa in lagu ogeysiiyaa waaxda Adeegga Macaamiisha gudahooda 7 maalmood laga bilaabo taariikhda iibsashada. Caddayn cad waa in la bixiyaa iyada oo caddaynaysa in badeecada / adeegga la iibsaday aan lagu qeexin websaydhka. Ashtakooyinka ku saleysan kaliya waxyaabaha macmiilka uu ka rajeynayo ama rabitaankiisa lama ixtiraamo.
Policy Siyaasadda Ka noqoshada Is-qoritaanka:
Markaad iibsanaysid Shirkad, Elite ama Celebrity rukhsad, si otomaatig ah ayaa lagugu soo dallici doonaa isla maalinta bil kasta. Haddii waqti uun aadan u baahnayn inaad iska diiwaan geliso YTpals, farriin noo soo dir annaga Nala soo xiriir Bogga waxaanan u dejinaynaa akoonkaaga inuu dhacayo dhammaadka rukhsaynta bisha aad hadda ku jirto. Waa lagugu soo dhaweynayaa inaad joojiso rukumadaada wakhti kasta. Haddii tusaale ahaan, aad iska diiwaangalisay Sebtember 23rd, laakiin noo qor ku saabsan joojinta akaaagaaga toddobaadyo ka dib Oktoobar 10th, waxaan u dejinaynaa akaaagaaga si loo kansalo Oktoobar 23rd, taas oo noqon doonta dhammaadka rukummadaada bishaan socota. Haddii aad doorbideyso joojinta deg-degga ah, si fudud noogu soo sheeg oo annagana sidaas ayaan kuugu samayn karnaa. Khasab kuguma ahan inaad ku sii jirto rukhsad wakhti go'an, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad qoraal noo soo dirto markaad diyaar u tahay inaad baabiiso. Ka dib waanu qaban doonnaa oo waxaan kuu soo diri doonaa farriin xaqiijin ah.
Policy Siyaasada Lacag celinta Isdiiwaangalinta:
Haddii aad iibsato qorshe isdiiwaangelin oo aadan ku faraxsanayn adeegga sabab kasta ha noqotee, fadlan nala soo xiriir 7 maalmood gudahood taariikhda aad bixisay rukummada oo si buuxda ayaan u celin doonnaa oo waan baabi'in doonnaa rukunkaaga. Haddii aad nala soo xiriirto wax ka badan 7 maalmood ka dib markii bixinta lacag bixintaada la sameeyay oo aad codsato lacag celin, kooxdeena ayaa dib u eegi doonta koontadaada iyo haddii aan u aragno inay munaasib tahay, si buuxda ayaan u soo celin doonaa dalabkaaga. Maalmihii 7 ee la soo dhaafay, xaq uma lihid inaad soo celiso.
Waxaa loo xilsaaray qanacsanaanta
Waxaan ka soo horjeednaa alaabtayada waxaanan ku faannaa inaan bixinno adeegga ugu fiican ee adeegga warbaahinta bulshada ee internetka maanta. Mar walba ma bixin karno lacag celin, laakiin haddii ay ku jirto maalmaha 7 aadan ku faraxsanayn amarkaaga Nala soo xiriir oo waxaan ka heleynaa qaraar ku saabsan walwalkaaga.